Young Learner Scholarship Registration form | British Council
Young Learner Scholarship Registration form
Thank you for your interest in the British Council’s Young Learner Scholarship Registration. Please fill in the following form and our sales and customer service team will be in touch with you shortly.
* Child Name (ကလေးအမည်)
* Student ID (*if applicable) ကျောင်းသားနံပါတ် (လက်ရှိတက်ရောက်နေသောကျောင်းသားဖြစ်ပါက)
* Parent Name (မိဘများ၏အမည်)
* Parent occupation (မိဘများ၏အလုပ်အကိုင်)
* Contact Number (ဖုန်းနံပါတ်)
* Email (အီးမေးလ်)
* Public school or Private school (အစိုးရကျောင်း (သို့) ပုဂ္ဂလိကကျောင်း)
* How long have you been studying with us? (ဗြိတိသျှကောင်စီတွင်သင်တန်းတက်သည့်အချိန်ကာလမည်မျှရှိပါပြီလဲ။)
* Can you tell us how this scholarship would help further your child’s education? (ဤပညာသင်ဆုသည်သင့်ကလေး၏ပညာရေးအတွက်မည်သို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါမည်နည်း။)
* If your child winsascholarship, what will be your long-term plan for their language education? (ဤပညာသင်ဆုဖြင့်ကျောင်းတက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကလေး၏ပညာရေးရှေ့ဆက်ရန်အတွက်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသလဲ။)
British Council will use the information that you are providing to process your registration which is in agreement with our terms and condition.